Ny toerana mora indrindra eto amin'izao tontolo izao dia any Azia | Vaovao momba ny dia
Maria Jose Roldan | | Bali, Bangkok, Hanoi, Indonezia, Malasia, Tailandia, Fitsangatsanganana any Azia, i Vietnam
Raha te handehandeha any amin'ny toerana mora ianao ary tianao ihany koa izy ireo amin'ny zavatra rehetra arosony dia tsy hadinoinao ity lahatsoratra ity satria holazaiko anao ny momba ny toerana fizahan-tany sasany mety hahaliana anao. Inona koa, Zava-dehibe ny hahafantarana hoe aiza no ahaizananao manao fialan-tsasatra tsara fa ny paosinao dia toa tsy sosotra loatra.
Maneho hevitra momba ny bilaogy Tim Leffel , mpanoratra ny boky The Destuces Cheapest World ': Firenena 21 Izay Ahazoana vola be. Fitsangatsanganana sy fialan-tsasatra avy amin'ny fisafidianana ireo toerana mora vidy indrindra eto an-tany, izay mazava ho azy fa maro an'isa Aziatika.
1 Tanànan'ny Aziatika
3 Azia atsimo atsinanana ho an'ny backpackers
4 Ny lafo indrindra dia ny sidina
5 Rehefa any amin'ny toerana halehanao ianao
Any no misy azy sahabo ho 700 kilometatra avaratry Bangkok ary izy dia iray amin'ireo tanàna be mpitsidika indrindra any Thailand. Tanàna iray fantatra amin'ny anarana hoe "The Rose of the North" ary tanàna tena tsara izy io noho ny natiora izay ao.
Miresaka momba ny renivohitr'i Nepal izahay ary izany no antony itadiavana mpizahatany maro. Ity tanàna ity tena mitovy amin'ny tanàna aziatika mikorontana izy ioSaingy tanàna somary kely izy io, iray tapitrisa sy sasany ny mponina ao aminy. Any amin'ny haavo 1317 metatra ambonin'ny haabon'ny ranomasina no misy azy ary raha hitsidika azy indray mandeha ianao dia te hiverina. Ny arabe, ny tempoliny, ny olona, ​​ny kianja ary izay rehetra atolony dia hahatonga anao hiverina. Ny fahamoran'ny Napalese dia hahatonga anao hahatsapa ho ao an-trano.
Hanoi dia tanàna iray izay tianao ho an'ny zorony tsirairay avy ary tsy dia lafo ihany koa, noho izany dia ho ara-toekarena ho anao ny mankafy andro maromaro any (farafaharatsiny ampitahaina amin'ireo toerana fizahan-tany hafa). Hanoi dia renivohitr'i Vietnam ary any avaratry ny firenena no misy azy. Tanàna iray manana tantara efa an'arivony taona mahery izy ary maro ny zavatra manintona hita fa tsy hanana andro hahita azy rehetra ianao.
Raha mankany Bangkok ianao dia ho faly mankafy ny fanaovana ny guiri isaky ny zorony. Bangkok dia any Azia atsimo atsinanana. Any Thailand, ity tanàna ity dia fantatra amin'ny anarana hoe Krung Thep mba hilazana ny habeny goavambe. Misy mponina 8 tapitrisa ao ary misy olona tia ny korontana mahazatra eto amin'ity tanàna ity ary misy ny hafa mandroaka azy ireo.
Ny arabe, ny valan-javaboary, ny gastronomy, ny fanorana, ny fety na ny toeram-pivarotana dia hahatonga anao haniry mandrakizay any.. Tsy halahelo na inona na inona ianao ary tsy tanàna lafo vidy toy izany koa.
Fa raha ny nosy no tadiavinao ary te hahalala endrik'olona mahafinaritra ianao ary hankafy ny fitoniana sy ny fiadanam-po entin'ny nosy misy ranomasina dia tsy azonao adinoina ireto toerana manaraka ireto:
Borneo, Malezia ary Indonezia
Azia atsimo atsinanana ho an'ny backpackers
Azia atsimo atsinanana dia tena paradisan'ireo mpanao kitapom-batsy. Ny firenena tena tsy mandroso dia lafo tokoa satria vitsy ny tolotra sy ny tinady, mampiakatra ny vidiny. Izany no mitranga amin'ny toerana maro any Amerika atsimo ary indrindra any Afrika. Izany no antony raha te hijanona sy hahazo aina ianao dia tsy maintsy manomana ny paosinao, ary raha te-hihary vola ... avy eo ny zavatra tsara indrindra dia ny fieritreretanao ny fomba fitetezana backpacker.
Etsy ankilany, ny ankamaroan'ny firenena Azia atsimo atsinanana dia mivoatra izay misy tolotra fizahan-tany malalaka ary koa ny fangatahana, miaraka amin'ny vola sy ny vidin'ny fahasamihafana eo amin'ny fiainana, dia manosika ny vidin-javatra. Ny vokany dia any Thailand, Malaysia, Vietnam na Indonezia isika dia afaka mivezivezy amin'ny vola mampihomehy (raha toa ka apetratsika ny fampiononana) na mandany vola tsy mendrika (fantatrao, ny foto-kevitra momba ny haitraitra Aziatika). Noho io antony io dia miankina aminao sy ny hevitrao amin'ny fankafizanao ny fialantsasatra no mahatonga anao manapa-kevitra ny amin'izay karazana dia tianao haleha..
Ny lafo indrindra dia ny sidina
Ny hany zavatra tena lafo any Azia atsimo atsinanana dia tonga any, ny vidin'ny sidina. Manana safidy roa ianao mba hampihenana azy:
Afaka miandry amin'ny minitra farany ianao, izay milaza fa manana daty mandroso sy miverina mandrindra ianao ary olona roa no farafaharatsiny. Mety hatahoranao ihany koa ny fahatongavan'ny andro fialan-tsasatra sy ny fahaverezan'ny sidina satria efa vita famandrihana ny zava-drehetra.
Na azonao atao mialoha ihany koa ny fividianana ny tapakila araka izay tratra, mba hahazoana ny tolotra tsara indrindra. Ary midika izany fa tsy dia misy dikany loatra ary manana ny kasainao hatao ... ary raha misy zavatra tsy ampoizina miseho, dia azo inoana fa ho very ny vola na ny ampahany betsaka aminy, satria rehefa mamandrika lavitra mialoha ianao dia matetika tsy dia misy antoka firy miverina raha tsy hoe manafoana ny fiantohana ianao.
Rehefa any amin'ny toerana halehanao ianao
Raha vao eto an-tany, tsy mahazo aina ny fitaterana an-tany fa mora vidy ihany. Ary ny zotram-piaramanidina eo an-toerana dia manome taha ambany dia ambany.
Raha ny momba ny toeram-ponenana, ankoatry ny vanim-potoana na hetsika manokana dia tsara kokoa matetika ny manakarama rehefa tonga ianao, manontany ary mampitaha ny vidiny. Na dia afaka manolotra tolotra tena mifaninana aza ireo mpivarotra ambongadiny sasany.
Ny sakafo dia tsy vitan'ny hoe mora vidy ihany, fa tena tsara sy miovaova isan-karazany, ary tena lafo tokoa.. Mazava ho azy, raha mifanaraka amin'ny sakafo eo an-toerana ianao. Raha misakafo amin'ny trano fandraisam-bahiny mirary ianao, dia hitovy vidiny aminao sy eto io.
Amin'ireto fepetra ireto dia mazàna no tsara indrindra ny manomana dia lavitra (manomboka amin'ny 3 herinandro no ho miakatra) hahafahanao mihetsika tsy maimaika izay hahatonga ny dia ho lafo kokoa ary hanonitra ny fampiasam-bola amin'ny tapakila. Fahita tokoa ny mihaona amin'ireo vondrona mpianatra izay naharitra herintaona sabbatika sy Efa am-bolana maro izy ireo no nitety an'i Azia tamin'ny teti-bola kely indrindra. Ka raha te-hitsidika ireo toerana voalaza etsy ambony ianao, ny zavatra tsara indrindra azonao atao dia ny drafitra mialoha izany, ary ankafizo izay rehetra atolotry ny toerana anao anao!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » tanàna » Bali » Ny toerana mora indrindra eto amin'izao tontolo izao dia any Azia
Luzon, nosy lehibe indrindra any Filipina